Kyaw Zay Ya » Archives » 2009 » July
Kyaw Zay Ya Random Of My Life Monthly Archives: July 2009	July 21st, 2009
0 First trip with my camera မုံရွာ၊ မန္တလေးနဲ့ မင်းကွန်းတောင်ရိုးကို ရောက်ခဲ့တုန်းက ပုံတွေ အချို့ကို တင်ပေးလိုက်တယ်………..
Shot with Canon EOS 400D DIGITAL at 2009-07-20
Tweet This Post Uncategorized July 20th, 2009
0 Megan Fox Wallpapers Transfomers2ကို လူတိုင်း ကြည့်ဖူး ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် အဲဒီ့ အထဲက မင်းသမီးလေး Megan Fox ရဲ့ အလှတရားကို မေ့နိုင်လိ့မ်မယ် မထင်ဘူး။ အခု အဲဒီ့ မင်းသမီးရဲ့ Sexy wallpapers လေး နှစ်ခု တွေ့လို့ တင်ပေး လိုက်တယ်။ အသုံးပြုလိုသူများ ဒီမှာ ဒေါင်း၍ ယူတော်မူကြပါကုန်……..
Click here to download Sexy Megan Fox wallpaper (1900×1200) #1 (via skins.be)
Click here to download Sexy Megan Fox wallpaper (1900×1200) #2 (via DesktopStars.ru)
Tweet This Post Uncategorized July 14th, 2009
0 Firefox 3.5 T-shirt Firefox 3.5 ပုံပါ T-Shirt များကို Mozilla Store မှာ စတင် ရောင်းချ ပေးနေပါပြီ တစ်ထည်ကို 19.15 ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် ကို shipping fee ကတော့ ဘယ်လောက်မှန်း မသိသေးပါဘူး။
Tweet This Post Uncategorized July 12th, 2009
0 My First Photos and Model Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီက ကင်မရာလေး တစ်လုံးဆွဲလိုက်တယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ လက်တည့်စမ်းထားတာလေး တွေပါ….
Tweet This Post Uncategorized July 11th, 2009
0 Download Firefox 3.5, the fastest ever Firefox web browser Mozilla released Firefox 3.5 on June 30th, 2009. What’s new about it? Should you upgrade/install?
Play audio and video without plugin — Firefox 3.5 now support HTML5 and elements including native support for Ogg Theora encoded video and Vorbis encoded audio.
Click here to download free Firefox 3.5. Or click here for Firefox in 70 different languages. Tweet This Post Uncategorized Older Entries July 2009